Dukaan 2000W Baaskiilada dufanka leh ee korontada ugufiican | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products Baaskiilada korantada ugu fiican Baaskiil Awood AATAT2000 7W super xoog leh oo awood badan oo karti leh
Baaskiil Awood AATAT2000 7W super xoog leh oo awood badan oo karti leh
Battery: 60V 18Ah Battery Lithium
Xadhig: Saxanka hore iyo gadaal 180mm
Turo: Dibedda 26 * 4.0 inji
Xawaaraha Heerka: 45-55km / h
Load Max: 150-200kgs
Baaskiil duug ah oo xoog badan oo awood badan 2000W baaskiil
Tani 2000w baaskiilka baruurta korontada waxay leeyihiin laba astaamood oo waaweyn oo aad ka rabto baaskiil koronto - waxay leedahay matoor awood leh oo kugu kaxayn kara fuulitaanka, taayirrada dufankuna waxay ku habboon yihiin bixinta socod siman oo kalsooni leh marka aad onkoddo waddooyinka waddada ka baxsan. Sidoo kale iswaafaji batrool 60V ah oo leh awood sare oo lithum ah, taas oo macnaheedu yahay inaad ku raaxeysan karto raacitaanka adiga oo aan wax cabsi ah ka qabin in baaskiilkaagu uu korantada ka dhammaan doono kalabadh ilaa fuulid xun. Muuqaal Sawireed motor
Mobillada hubaysan ee cimilada lahayn ee 2000W waxay bixiyaan awood sare oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud uga gudubto dhulalka kaladuwan. Waxaad u fuuli kartaa dhanka buurta dusheeda, waxaad mari kartaa jidka ugu taxaddaran khiyaanada badan oo waxaad heli kartaa xawaare sare oo ah 55km / saacaddii hore. Midwalba wuxuu ka badan yahay waxtarka 80 boqolkiiba waxuuna ka hooseyaa 60 Db dhawaq. Kusoo qaado wax-ku-ool sareeya laakiin dhawaqa fuulida hoose. Battery
60V lithium batteriga ayaa kugu dhejin kara shuruudaha badan, waxaa jira 18AH iyo 20AH awooda aad dooran karto. Naqshadeynta laga saari karo waa mid ka mid ah iftiiminta baaskiil baruurta korantada leh. Looma baahna inaad ku dhaqaaqdid raggan waaweyni meel u dhaw godka ama raadinta xarig koronto. Kaliya u baahan inaan rogno furaha si aad u qaadatid batteriga, ka dibna ku soo dallacdo batteriga guriga ama meelaha kale iyadoo la keenayo cajiin dhan 71.4V 3A. bandhigay LCD
Oo lagu qalabeeyay shaashadda LCD shaashad weyn ayaa muujineysa data badan oo elektaroonig ah, tusaale ahaan Fogaanta, Masaafada, Heerkulka, Awoodda batteriga, Awooda Mootada, Xawaaraha Maxadka iwm iyo biyo-qabashada heer sare ah waxay sidoo kale qabataa shaqo fiican roobka. Shan heer oo ah taakuleynta lugta iyo ciribta suuliga riix, waxay ku keenaan matoorka xawaare aad u sareeya oo loogu talagalay baaskiilkan dufanka leh ee baruurta leh. Iftiin Cad
Nalalka iftiinka dambe ee loo yaqaan 'LED LED', ee caawinaya biligleynaya markii la aroorayo (Haddii ay tahay birqabteyn hore ama giraangiraha dambe), nalkani wuxuu xasuusin karaa dadka kale iyo gawaarida inay fiiro gaar ah si loo hubiyo badbaadada aad fuushan tahay habeenkii ee wadada. Dufanka dufanka leh
Taayirrada baruurta ee 'Kenda 26 * 4.0 inch' waxay leeyihiin awood qaadasho badan, saamayn kayd fiican leh iyo xajin sarreysa. Xitaa waddada buuraleyda qallalan, waddada magaalada, barafka, xeebta ama waddada wasakhda ah, si fudud ayey ula qabsan kartaa. Waxaan sidoo kale wali siineynaa xulasho kale oo tayo wanaagsan leh.
Haddii aad xiisaynayso baaskiil koronto oo sarreeya, booqo Baaskiil duug ah oo 1000w koronto ah, 500W labalaab baaskiil koronto, 750W bafang matoor dufan ebike.
Tags:baaskiilka korontada duufaanta dufanka leh
Ka hor: 20 oo ah dusha sare ee dufanka korontada korantada A6AH20F
Next: 26 / 28inch haweeney magaalada dooratay baaskiil 48v 500w 750w A5AH26